कमेन्ट् मा Open लेख्नुस् र क्लिक गरेर हेर्नुस् ४ मिनेट ३५ सेकेन्डको भिडियो ! – Sidha Post 24
विष्फोटनकै संकेत स्वरुप मेरो या ेनिको मुखभागबाट निस्किएको चिल्लो चि प्लो पदार्थ मेरो हातले स्पर्स गर्दै गर्दा ढोकाबाहिरबाट आमा कराउनु भयो , ू ए १ सानी , आज त बाख्राहरु मरिसकेहोलान । जा जा पा
आमाको आवाज क्रमश मधुरो हुंदै गयो सायद मेरो ढोकाबाट फर्किसक्नु हुंदैथियो । यो तातो घाममा बाख्राहरु भएको ठाउं सम्म पुग्नु पर्ने हुंदा मरे जतिकै लागेको थियो मलाई तर विकाशलाई त्यहाँ भेटिन सकिने संभावनाले मलाई जाँगरिलो बनायो ।
म सपनाबाट ब्युँझिए झैं उठें र एउटा तौलिया कम्मर मा बेह्रें यसो गर्दा पातलो म्याक्सीभित्रको मेरो बिना पेण्टीको या ेनिको आकार र यो नि क्षेत्रका रौंहरु लुक्न सक्थ्यो । टाउकोमा सानो रुमाल राखेर घाम छेल्दै म बाल्टीभरी नुनपानी बोकेर बाख्राहरुलाई खुवाउन हिडें ।
भातपकाई (भाँडाकुटी) बाट शुरु हुने हाम्रो बालखेल संधै लोग्ने स्वास्नी भएर लोग्ने स्वास्नीको भुमिका निर्वाह गर्दै बच्चा जन्मिउञ्जेल सम्म खेल्ने गथ्र्यौं । सानोमा यस्ता सबै खेल खेल्न सिकाउने मेरो नायक आज कसरी यति धेरै सोझो भयो ?
मनभरी बिकाशलाई बोकेर म एकसुरमा हिंड्दै गर्दा विकाशकै आवाजले म झस्किएं (’ ए– सानी , तिम्रो बाख्राहरु यहाँ ल्याईदिएको छु , पानी पनि ख्वाईदिएं है । ‘ म बाल्यकालको स्मृतीमा हराईरहेकोले होला एकपटक त विकाशले ए..सानी खेल्न आउ न भनेको जस्तो लाग्यो तर यथार्थमा विकाशले भनेको मैले बुझिहालें ।
उसले त मलाई चोखो माया साँचो अर्थमा गर्दोरहेछ । मैले पो बुझ्न नसकेको रहेछु उसको मायालाई । त्यसबेला मलाई आफ्नो उत्ताउलोपना देखेर एकैछिनको लागी आफैं संग एकैसाथ लाज र घिन लागेर आयो । मेरा आँखाभरी आँशु भरीए ।
त्यती धेरै जोश बोकेर विकाश संग या,ैन कृ,डामा लिप्त हुने अभिलाशा बोकेर आएकि मैले विकाश संग माफ माग्न पनि सकिनं । सायद उसले मेरो आँखाले गरिरहेको याचना बुझ्यो होला दुबै हातले मेरो दुबै गालामा भएको केशहरु पन्साउंदै लगेर कान मुन्तिर कसिलो गरेर समाई मेरो ओठमा चु,म्ब,न गर्यो ।